ZimbabweToday, Author at Zimbabwe Today - Page 3 of 1092
Home / ZimbabweToday (page 3)
Zimbabwe’s Apparent Coup: What We Know By AUSTIN RAMZYUPDATED 12:01 PM Continue reading the main s Zimbabwe’s Army Says Mugabe Is Safe Uniformed officers appeared on state-run television to deny orchestrating a military takeover, saying their intention was to “pacify a degenerating political, social and economic situation.” Photo by Jekesai Njikizana/Agence France-Presse …
Robert Mugabe’s most famous quotes Mugabe at the 72nd UN General Assembly said ‘President of the United States, Mr Trump; please blow your trumpet’ [Jason Szenes/EPA] [EPA]\_During his 37-year rule of Zimbabwe, Robert Mugabe has built up an impressive amount of controversy, mostly by using colourful and often hateful language. …
After 37 Years, Rule Of Zimbabwe’s Mugabe Appears To Be Over By Farai Mutsaka and Andrew Meldrum Robert Mugabe Harare, Zimbabwe (AP) Zimbabwe’s military controls the capital and the state broadcaster and is holding President Robert Mugabe, 93, and his wife under house arrest. It appears that the world’s oldest …
Pictures of Zimbabwe Finance Minister Dr Ignatius Chombo’s bullet-riddled house have emerged‚ showing that his arrest was no simple affair. It is understood Chombo was taken captive from his Borrowdale home around 1am on Wednesday after the Zimbabwean army’s televised announcement that it was taking control of the country. A …
Page 3 of 1,092«12345	»	102030...Last »
Didymus Mutasa: #Zimbabwe VP Emmerson Mnangagwa Stole Diamonds from Chiadzwa